Kutyaira mu wiricheya
For vanoshandisa wiricheya kutyaira mota dzimwe nguva kunogona kunge kuri kurota. Kuvimba nerubatsiro kunogona kutyisa mavhiripu nekuda kwekuenderana kunodiwa. Kunyangwe paine shanduko dzemotokari iwe dzaunogona kuwana kune dzimwe mota dzakanyatsogadzirirwa mota dzeiyo vanoshandisa wiricheya. Imwe kambani ine mota yakanyatsogadzirirwa vanoshandisa wiricheya ndiKenguru. Muchikamu chino, iwe uchaudzwa nezve yakasarudzika mota yavanayo uye zvakare zvinoitwa nekambani. Iwe zvakare uchadzidza nezve dzimwe nzira kune iyo pricey Kenguru modhi.
The mutengo izvi wiricheya mota ine hushamwari inosvika madhora zviuru makumi maviri uye izere nemagetsi. Iyo mota diki inogona kubhadhariswa husiku uye kufamba 20,000 mamaira chete pane iwo mutero. Kudonha ndekwekuti kumhanyisa kwepamusoro kunongova mamaira makumi maviri nemashanu paawa saka mugwagwa usiri nzira yakanaka yekuenda kuchitoro. Imwe yemabhenefiti makuru ndeye wiricheya pachayo inogona kupeterwa mumotokari zviri nyore nekuda kwebhatani bhatani bhatani. Ichi chimiro chinozvisiyanisa nekutyaira yakajairwa mota nekuti kana iwe uchityaira yakajairwa mota iwe unofanirwa kuzvishandura iwe pachako kuchigaro uye kudhonza iyo wiricheya kumashure iwe nezvose izvi zvinogona kuoma zvakanyanya nemumwe munhu asina muviri wepamusoro zvakanyanya simba. Ikozvino mhando ivo vakagadzira anokodzera chete Vashandisi vemawiricheya. Iwe haufanire kuve nyanzvi mumotokari kuti ugone kuityaira nekuti zviri nyore kwazvo kutyaira sezvo iri yemagetsi. Iyo inotevera modhi yavanogadzira ichave iri mota ine hushamwari vhezheni kubvira yakawanda ye vanoshandisa wiricheya kazhinji kuva mawiricheya emagetsi naizvo.
Ukabaya pano iwe uchaverenga chinyorwa icho chinotsanangudzawo zvishoma nei nei kambani yakatanga uye kuti yakatanga sei. Kana iwe usingakwanise kutenga mota iyi saka unogona kugara uchigadziriswa kune yako yazvino mota kana iripo. Enda kune iri padyo newe tsika kufamba shopu. Mimwe mienzaniso yekushandurwa kwemotokari inosanganisira, yekumashure yekupinda mota, yakavhurika musuwo, kusimudza denga, tsika gonhi-bapiro remukova, tsika mafuta pamusoro pemotokari inosimudza, musuwo unodzosera kumashure, uye munhu anosimudza. Ehe, pane zvakawanda asi iyi ingori mimwe mienzaniso yezvaunogona kuti zviitwe kumotokari yako. Ivo zvakare vane akasiyana mitengo yemitengo yeshanduko yega yega yaunosarudza uye inosiyana kubva kuchitoro kuenda kuchitoro.
Iyo huru webhusaiti iyo inokuzivisa iwe zvakanaka pane dzakasiyana siyana mota shanduko iri mota mafambiro ekugadzirisa. Zvese zvavanotengesa vane ruzivo rwakadzama pamusoro pazvo. Iwe unogona zvakare kutenga pre-yakagadzirwa mota ne kuvandudzwa kwewiricheya. Tarisa webhusaiti kunze kana iwe uchida kunzwisiswa zvirinani pane chero shanduko. Usamhanye mune chero chinhu rangarira kutora nguva yako uye kutsvagurudza zvese uye pamwe ungatomboedza imwe mota yakagadziridzwa yemumwe munhu kuti uone kana iri kwayo iwe.
Unyanzvi iWiricheya Shamwari